Lapho kuphela ubudlelwano, yimuphi umuntu umuzwa wokuba nesizungu futhi yokuzingabaza, ngoba uthambekela ekucabangeni ukuthi uthando yakho iphelile ngenxa yenu ukuthi kukhona okubi esikwenzile. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi yakho awenzanga iphutha, futhi waphonsa. Ngeshwa, inkinga efanayo ezibhekene zonke okungenani kanye empilweni, ngisho nabantu abaningi uyazethemba futhi ezimisele, ngoba lokhu akekho iphephile. Futhi khona-ke kuphakama umbuzo, uma baphonse intombazane ukwenza? Yiqiniso, zikhona izindlela eziningi kanye namasu ukuze ukhohlwe ukuhlupheka kwakhe, kodwa nenzani, ngokushesha noma kamuva ukucabanga kokufelwa othandekayo futhi prokradutsya ku ikhanda lakho futhi kufanele bakulungele ke ngangokunokwenzeka.
Ngakho waphonsa lezo zinhlamvu intombazane ukwenza?
Uma ubhekene nenkinga yini okumele uyenze uma intombazane wena ewa uthando, into yokuqala ukwenza wonke umzamo ukukhohlwa wakhe. Yingakho akufanele ukumbhalela umlayezo ukubiza kayikhulu ngosuku, uma nje ukubuza ukuthi izinto zase zihamba. Khohlwa ke njengoba okwakwenzeka. Uma yena wayesukile wena, mhlawumbe ukuze ezinye umfana, makube njalo. Ngakho-ke ngeke namanje ukuthola intokazi ehloniphekile, ngubani uyokuthanda ngendlela wena ufanelwe. Asikho isidingo bachithe amahora angu-computer elinde uhlamvu olulodwa kusuka yakhe owayeyintombi. Donsela ngokwakho ndawonye, buthana, ngoba wena nsizwa efanayo. A indoda yangempela ayifanele owabulawa ngenxa yabesifazane.
Futhi uma kwenzeka, futhi awazi ukuthi yini okumele uyenze uma yena selupholile, bese kuba ngu balahle imicabango ngakho, futhi zonke izinto kancane empilweni yakho, okusikhumbuza wakhe. Kungcono kulezi zimo ukuya endaweni ethile, kodwa uma ithuba elinjalo. Phela, Ukushintsha kwenkundla, abantu abasha, abangane abasha ngeke nje kuphela kukuzuzise. Futhi ubani owazi, mhlawumbe uzokuqonda ukuthi ayilokothi ilifunde futhi akazange athande lolu intombazane, futhi kwaba nje umkhuba. Kuwufanele ngizame, ngoba noma kunjalo, awuphethe lutho lokukha ulahlekelwe, futhi nakakhulu kusukela lokhu, nakanjani ngeke.
Futhi, udinga ulokhu ecabanga wakhe ngokuthi unkulunkulukazi yangempela, phela yona phakathi nalesi sikhathi waba ekahle ubuhle, isibonelo kuwo wonke amantombazane, nokubheka ke kuthabathela ecaleni, ungakwazi kalula ukuthi lokhu akulona iqiniso. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuba abstract kusuka konke okwenzekayo emhlabeni.
Yiqiniso, uma waphonsa intombazane ukuthi yini okufanele uyenze ungakwazi ukweluleka abangane bakho naye kanye bezithola besezimweni efanayo. Ngemva kokuhlangenwe nakho kwabanye kungaba wusizo kakhulu kuwe. Khumbula ukuthi ukuphila kuyaqhubeka. Izwe namanje eziningi amantombazane abenza languishing ilindele wena. Futhi akunandaba, nini kulo mhlangano eside elindelwe, ngoba manje ukhululeke ngokuphelele, futhi "plus".
Hlala umatasa. Sekuyisikhathi qondanisa ngokwakho nenqubo bese ithunyelwa "ukuzingela". Libuye kanzima zenziwe ukuzuzwa imigomo emisha yokuthi zonke izinhlobo izizinda zokuphila, kuhlanganise ukuba bangabandlululwa emsebenzini, ungakwazi ukuvula ngisho ibhizinisi elincane, uma nethuba.
Uma uphonsa intombazane, yini okufanele uyenze kunoma yisiphi isimo akunakwenzeka!
Musa noma ucabanga ukuqala ukuphuza nosizi, ngoba kuyokusiza, kodwa okunalokho ngeke kuphela isimo sibe sibi isimo sokucindezeleka futhi ngeke ashayele wena wacindezeleka. Futhi, musa noma ucabange ukuthi uvumelane nesiphakamiso: "Ake sibe abangane?!" Khohlwa konke uke waba, okungenani ekuqaleni, kuze kokudamba kwezinhlungu.
Ngakho, uma kwenzeka ukuthi wena basuka intombazane ke ungalilahli ithemba, ngoba okwamanje ozalwa owayezonika ukwenza uwa phambi kwakhe, ikakhulu uma ethanda ukuba ubalekele wena. Futhi yena akazi wayeshonelwe! Futhi mhlawumbe esikhathini esizayo esiseduze yena uzozisola ukuthi uma ukwenze futhi ufuna ukuza emuva, kodwa kuyoba kwephuze. Ngoba manje engawuboni udinga! Zonke ubuhlungu esikhathini esidlule.
Indlela thunga guys. iseluleko esihle
Kanjani ukukhohlwa umfana ngubani uthando kakhulu? Kulula - uzithanda wena!
Umyeni Future - Unicode: Amaphutha Ethethelela, kodwa misa umtshina Posada uma sula kunesidingo imemori
I-Traumeel: imiyalo yokusetshenziswa
Anomalies of eChernobyl: Imiphumela phezu thusa bhicongo yenuzi
Imitha zokukhiqiza Russian: Izibuyekezo nezeluleko okukhetha
Kanjani ukuba baphumelele isivivinyo umchamo kahle?